Android ဖြင့် Hacking လေ့လာလိုသူတွေအတွက် root မလိုဘဲ linux သုံးရအောင် - Khit Minnyo
Hacking with Android Android ဖြင့် Hacking လေ့လာလိုသူတွေအတွက် root မလိုဘဲ linux သုံးရအောင်
by KhitMinnyo on January 24, 2018 in Hacking, Hacking Knowledge, Hacking Techniques, Hacking with Android
Android ဖုန်းတွေမှာ Linux Terminal နဲ့ nmap, metasploit စတဲ့ tool တွေကို အသုံးပြုပြီး Hacking လေ့လာလိုသူတွေအတွက် ဒီ Article လေးက တစ်စုံတစ်ရာ အထောက်အကူပြုနိုင်မယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။
ဖုန်းမှာ Termux app ကို ထည့်သွင်းသုံးရမှာဖြစ်လို့ Termux နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိသင့်တာလေးတွေကို အရင်ဆုံး ဆွေးနွေးပါရစေ။ စိတ်ရှည်ရှည်လေးထားပြီး ဖတ်ပေးပါခင်ဗျာ။
Termux ဆိုတာ ဘာလဲ?
Termux ဆိုတာ Android, Chromebook နဲ့ Fire OS တွေအတွက် ဖန်တီးရေးဆွဲထားတဲ့ Terminal Emulator & Linux Environment တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ Android တွေအတွက် root မလိုဘဲ တိုက်ရိုက် တင်သွင်း သုံးနိုင်ခြင်းက Linux ကို လေ့လာလိုသူတွေအတွက်ပါ အဆင်ပြေစေပါတယ်။ အခြေခံ လိုအပ်ချက်တွေကို auto ထည့်သွင်းပေးထားပြီး ဖြစ်သလို ထပ်မံ လိုအပ်သော application/tool တွေကိုလည်း APT package manager ကို အသုံးပြု ဖြည့်သွင်းနိုင်တာကြောင့် သုံးရတာ လွယ်ကူ အဆင်ပြေတဲ့ Terminal Emulator တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
Termux သည် ဝယ်သုံးရသော program လား?
Termux သည် Open source project တစ်ခုဖြစ်လို့ ဝယ်သုံးစရာမလိုဘဲ အခမဲ့ အသုံးပြုနိုင်မယ့် Application တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားအခြားသော software များလိုပဲ Update တွေလည်း ထုတ်ပေးနေသလို Project တစ်ခုအနေနဲ့ ပိုမိုပြည့်စုံအောင် ဖန်တီးပေးထားတာမို့လို့ သုံးရ အလွန် အဆင်ပြေလာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
Android တိုင်းမှာ သုံးလို့ ရမှာလား?
Android ဖုန်းတိုင်းနဲ့ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ဖုန်းမှာလည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။ without root ဖြစ်လို့ root ရှိ ရှိ မရှိရှိ သုံးနိုင်မှာပါ။ Android Version5အထက်ဆို ပိုပြီး သင့်လျော်ပါတယ်။
ဘယ်လို Install ရမလဲ?
Google Play Store ကနေ အလွယ်တကူ install နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ဖုန်းမှာ PlayStore အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်လည်း ဒီစာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပြီး ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။
Install ပြီးသွားရင် Termux app ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ အောက်ပါပုံအတိုင်း မြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ပထမဆုံးလုပ်ရမှာက pkg upgrade လို့ ရိုက်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပါပုံအတိုင်းပါ။
Yes/no မေးလာရင် y လို့ ရိုက်ပြီး enter လိုက်ပါ။ အင်တာနက်လိုင်း ရှိဖို့ လိုပါတယ်။ သိပ်မကြာခင် $ သင်္ကေတလေး နောက်တစ်ကြောင်းမှာ တွေ့လာရင် အသင့် သုံးလို့ ရပါပြီ။
Hacking လုပ်ဖို့အတွက် Network Scanning tool တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Nmap ကို ထည့်သွင်းကြည့်ရအောင်။
apt install nmap လို့ ရိုက်ထည့်လိုက်ရုံပါပဲ။ y/n မမေးစေချင်ရင် -y လို့ ဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ (apt install nmap -y) ပေါ့
အားလုံး အဆင်ပြေမယ်လို့ ယူဆပါတယ်ခင်ဗျာ။ Kali ကို Termux မှာ ဘယ်လို သုံးမလဲ။ Metasploit ကို Termux မှာ ဘယ်လို သုံးရမလဲ။ Setoolkit ကို ဘယ်လိုထည့်သုံးမလဲ ဆိုတာတွေကိုတော့ နောက်ထပ် Article တွေအနေနဲ့ ဆက်ပြီး ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Termux မှာ Metasploit ကို အပြည့်အဝ အသုံးပြုနိုင်အောင် ဘယ်လို ထည့်သွင်းမလဲဆိုတာကိုတော့
ဒီစာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပြီး သွားကြည့်နိုင်ပါပြီဗျာ
Hacking ဝါသနာ ပါသူတွေအတွက်ကတော့
“လွယ်ကူလေ့လာ အခြေခံ Hacking နည်းပညာ” စာအုပ်လေးကို ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်သလို
စာအုပ်ရဲ့ စာမျက်နှာ ၁၁ မှာ ပါဝင်တဲ့ Member Form ကို ဖြည့်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက် ပေးပို့ခြင်းအားဖြင့် နောက်ဆက်တွဲ အွန်လိုင်းသင်ခန်းစာများကိုပါ အခမဲ့ ဆက်လက် လေ့လာနိုင်ပါတယ်
ကျွန်တော့်ရဲ့ Facebook Page Message မှ ဖြစ်စေ
Viber 09 976 41 3560 တို့မှ ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်စုံစမ်း မှာယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
Labels: Hacking, Hacking Knowledge, Hacking Techniques, Hacking with Android
Unknown January 24, 2018 at 12:36 PM
Mk Yaqoob March 7, 2018 at 4:06 AM
Burgess March 19, 2018 at 11:29 AM
As you play the diversion, there will beaninja running over the screen battling with the foes with the assistance of the fireballs and the swords also.fallout4bobblehead map
Unknown July 17, 2018 at 9:02 AM
ေက်းဇူး ပါ ဆရာ
zinminhtun December 25, 2018 at 9:31 AM
ဆရာက်ြန္ေတာ္ White hacking သမားျဖစ္ခ်င္တယ္ဒါေပမဲ့က်ြန္ေတာ္ေလ့လာတာတစ္၀က္တစ္ပ်က္ျဖစ္ေနတယ္။
Hardware ပိုင္းကို က်ြန္ေတာ္ ၄၀% ေေေလက္သိျပီးပါျပီ ဆက္လက္ေလ့လာေနပါတယ္ ကိယ္တိုင္လည္း ကြန္ပ်ဴတာထြင္ျပီးသံုးေနပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ Software ပိုင္းကို အေျခခံကေနေကာင္းေကာင္းသင္ျပမယ့္သူမရှိဘူး
Unknown February 28, 2019 at 3:16 AM
Parker Edward March 5, 2019 at 7:22 AM
isareally good article. You make this information interesting as well engaging. You give readersalot to think about and I appreciate that kind of writing. Random Password Generator Tool
Grassroots Development Association July 12, 2021 at 2:56 AM